Hot Mill Roller - China Hot Mill Roller Mutengesi, Factory -Jwell
Kupisa Mill Roller
Hot Mill Roller ine yepamusoro simba, kusimba uye kupisa kupisa nekuda kweakakosha dhizaini dhizaini. Iyo roller inogona kushandiswa mukati yakakwira diki epurasitiki ndiro uye jira rinoumba uye isina-yakarukwa jira kupisa kusanganisa.
Iyo roller muviri Sarudza super mhando alloy simbi senge 38CrMoA1A, 42CrMo, 60CrMoV, 9Cr2Mo nezvimwewo kuomarara kwepamhepo. inogona kusvika HRC58-62 mushure mekugadzirisa uye kupisa kupisa.
Iyo roller mukati dhizaini dhizaini senge yemhepo chiteshi uye circum kuchera gomba, iyo tembiricha mutsauko pakati peviri mativi e chinotenderera chichava chidiki uye iko kupisa kwekushisa kuchakwira.
LVT Composite pasi pasi Extrusion Line
Nhatu-rukoko PVC Solid Wall Pipe Co-extrusion Kugadzira mutsetse
UPVC Yemvura Inopa & Drainage Pipe uye CPVC Magetsi Kudzivirira Pipe Extrusion Line